Pbox_Power_Bank_PC1 40_(2.0)_(for_iPhone) ::: 365myanmar.com
ပင်မစာမျက်နှာ PowerBank Pbox Power Bank PC1-40 (2.0) (for iPhone)
Pbox Power Bank PC1-40 (2.0) (for iPhone)
by P box Power bank
Pbox Power Bank (for iPhone)
Model PC1-40 (2.0)
USB ကြိုးအရှည် 3ပေ
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် : 118 g
PRODA 12000mAh Time Series Powerbank (PPL-19)
Battery backup capacity 12000mAh
Three USB charging jack
2.1A peak current emissions
The indicator of the battery
LED light colors and light patterns.
Input: DC 5V - 2.0A
Output: DC 5V - 2.1A
REMAX Mini White Series 2600mAh Powerbank (RPL-3
Li-ion Battery: Polymers
Input: DC5V-0.8A Micro-USB
Output: DC5V-1A USB
Pbox Power Bank PC1-40 (2.0) (for Android)
Pbox Power Bank (for Android)
Model PC1-40 (1.0)
Input: DC5V - 1A
Output: DC5V – 1.8A
Pbox Power Bank ကတော့ iPhone များအတွက်ပါအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် iPhone Cable ကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် iPhone ကိုင်သူများအတွက်ပါ အသုံးတည့်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူလည်း သယ်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ခရီးသွားရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ယူဆောင်သွားနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ 4000mAh အားပါတဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်နေ့တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ်ခန့်အထိ အားသွင်းနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သယ်ဆောင်၍ လွယ်ကူစွာ အားသွင်းနိုင်ခြင်း
တစ်နေ့တာ လုံလုံလောက်လောက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
အာမခံပေးပါသည်၊ ၀ယ်ပြီး ၁၅ရက်အတွင်း ပစ္စည်းပျက်စီးခဲ့လျင် အသစ်တစ်လုံးပြန်လဲပေးသည်။ (အစင်းကြောင်းထင်ခြင်း၊ မိမိ၏အမှားကြောင့်ပျက်စီးခြင်းမှလွဲ၍) ပြန်လဲမည်ဆိုပါက ပစ္စည်းစုံလင်စွာပါရပါမည်။ (Accessories ၊ Warranty Card နှင့် ဘူးခွံပါပြန်ပါရမည်)
Accessories ပစ္စည်းများ အာမခံတွင်မပါပါ။
ဘာကြောင့် Pbox ကိုသုံးသင့်လဲ
iPhone အပြင် Android ဖုန်းများပါအသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Model PC1-40 (2.0) (for iPhone) USB Cable length 3'
Capacity 4000mAh/3.7V Body Aluminum
Input DC5V1A Battery Lithium Polymer
Output DC5V1A Flash light LED
Color Blue Warranty 1Year
USB Cable Nylon Fiber Weave
Copyright © 2020 365myanmar.com. All rights Reserved.